काममा मेहनत गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रेरक भनाइहरु - Safal Stories
Home Safal's Columns Quotations काममा मेहनत गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रेरक भनाइहरु
काममा मेहनत गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रेरक भनाइहरु
काम गर्दा-गर्दा दिक्क मान्नुभएको छ ? या कडा मेहनतले थाक्नुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने पनि यहाँ केही यस्ता भनाइहरु राखिएको छ, जसले तपाईंलाई कडा मेहनत गर्नको लागि फेरी घच्घचाउने छन् ।
सपना जादुले गर्दा यथार्थमा परिणत हुँदैन । त्यसको लागि पसिना र लगनशीलताको आवश्यकता पर्छ।
– कलिन पावल
आत्मविश्वास र काममा कडा मेहनतले नै सफलता दिलाउँछ।
बिहान छिट्टै उठ, कडा मेहनत गर र सकारात्मक सोंच । यसो गर्दा तिम्रो दिन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।
– जर्ज एलेन सिनियर
सफलता भनेको लगनशीलताको परिणाम हो। यदि लगातार रुपमा मेहनतका साथ काम गर्यौ भने तिमी सफल बन्छौ।
– डिवेन जोनसन
तिम्रो भित्री रुचीलाई पछ्याऊ, त्यसको लागि कडा मेहनत गर्न तयार होऊ, त्यसको लागि गर्नुपर्ने त्यागको लागि तयार होऊ र आफ्नो सपनालाई कसैलाई नियन्त्रण गर्न नदेऊ।
– डानभन बेली
कडा मेहनत र अनुशासन बिना व्यवसायिक बन्न असम्भव हुन्छ।
– जहाँगिर खान
बाटोमा अवरोध देखेर आफूलाई नरोक। यदि हिंड्दै जाँदा पर्खाल देख्यौ भने, नफर्क। त्यो पर्खाललाई नाघेर वा चढेर, कसरि अगाडी बढिन्छ, त्यो सोंच्न थाल।
भगवानले ती व्यक्तिहरुलाई मात्र सहयोग गर्छन्, जसले कडा मेहनत गर्छ।
– ए. पी. जे अब्दुल कलाम
जब तिमी काममा रमाउँछौ, तब काम सबैभन्दा राम्रो बन्छ।
कडा मेहनतको विकल्प केही पनि छैन ।
– थोमस एल्वा एडिसन
जब मानिसहरुले ममाथि विश्वास गर्दैनन् , मलाई रमाइलो लाग्छ। किनकी त्यसले गर्दा म अझ मेहनत गरेर काम गर्न थाल्छु र उनीहरुलाई गलत सावित गरिदिन्छु ।
– डेरेक जिटर
Previousपार्किङ्ग गरेको ट्रकमा सुत्ने घरविहिन केटो जब मेडिकल डाक्टर बने
Nextसम्बन्धमा गर्न नहुने छ सम्झौता